Viz Vectar gbakwunyere: Na-enye Nwepu-Efu Nweta | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » Apụta » Viz Vectar Plus: Na-enye Productionkè-Free Production
Viz Vectar Plus: Na-enye Productionkè-Free Production
Viz Vectar tinyere bụ sọftụwia dabere na IP, nke na - eweta ihe eji emepụta ndụ na ndị mgbasa ozi na ndị na - eweta ọdịnaya mgbasa ozi ebe ọ bụla. Ndị ọrụ ugbu a nwere ike ịgbanwee, jikọta, ma mepụta ụdị ọrụ ọ bụla maka ibi ndụ maka telivishọn, ịntanetị, na nkesa ekwentị ka ha na-ewepụ "ókèala ọdịnala" nke usoro mgbasa ozi, I / O, ọwa, na nnyefe. Viz Vectar Plus na-enye nkasi obi ịnwe ike iji wepụta nhọrọ nke nhazi site na mbido ma ọ bụ gburugburu igwe ojii ma nwee ikike ịrụ ọrụ n'ime ọtụtụ usoro ihe eji arụ ọrụ.
Live Kpọọ Njikọ a gụnyere ya na Viz Vectar Plus, ma were ọrụ niile bụ isi ọkpụkpọ vidiyo dị ka, Skype MS, MS Team s, Nzukọ Zoom om, Discord ™ na ndị ọzọ. Ihe dị iche iche nke ikpo okwu bụ na Live Call Connect na-emepụta ndị na-akpọ ogbako n'ime isi vidiyo dị iche iche, n'agbanyeghị ikpo okwu, iji nyefee ọtụtụ nhọrọ okike, na onye mgbasa ozi ọ bụla ma ọ bụ ndị na-eweta mgbasa ozi nwere ike iji ya maka ihe mmepụta na arụmọrụ dị ike.
"A na-eme Viz Vectar Plus n'ezie maka ndị na-akọ akụkọ ọhụụ taa na-achọta ụzọ ochie na-adịwanye ochie, nke siri ike, na nke na-akwụ ụgwọ. Site n'inye usoro mgbanwe, ndị ahịa nwere ike ịmepụta ọdịnaya dị mma karị,
n'ego a na-akwụ ụgwọ n'ihu, ” kwuru, sị Daniel Nergard, onye isi oche nke Vizrt Global. “Live Call Connectvery na-emepe ụzọ ndị ọzọ iji webata ọtụtụ ndị na-eme ihe nkiri na akụkọ ahụ, n'agbanyeghị ọnọdụ ha
ma ọ bụ ngwa mmasị. ”
Premiering na Viz Vectar Plus bụ Audio Jikọọ, Mgbatị a dị ịtụnanya na-eji nkà na ụzụ NDI nke na-ejikọta ihe niile. Ọrụ ọdịyo na-enyere ike ịgwakọta ọdịyo zuru oke na ngwa nhazi maka imewanyewanye mgbanwe. Usoro ntinyeghachi ohuru ohuru na-enye ohere maka otutu nsụgharị nke otu usoro ihe omume a nke nwere ike ịhazi oke akụkụ, mkpebi, na eserese dị iche iche na imepụta oge. Njirimara a nwere ihe egwu egwu, ndekọ, nkwanye, ụda, na eserese eserese, na Viz Vectar tinyere na-arụ ọrụ na ngwaike kọmputa na netwọọdụ dị na ntanetị yana njikọta IP nke na-enyere ụlọ ọrụ aka, nnukwu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ iji nweta ihe a chọrọ. Fọrọ nke nta na-akparaghị ókè IP video isi mmalite tinyere SMPTE 2110, NDI, SRT, RTMP, RTP, HTTP, SRC, enwere ike ịnweta ma jiri ya mee ihe n'otu oge, na-enye njikọta na ụdị ngwaọrụ mgbasa ozi niile, gụnyere ngwa NDI® | HX Camera maka ekwentị.
Viz Vectar Plus na-enyere mgbanwe azụmahịa na nnweta maka gburugburu ebe ọrụ ọ bụla, enwere ike ịgbanye ngwa ngwa kwa ọnwa. Atụmatụ na-ọnụ si $ 2,995 USMSRP kwa ọnwa. Oge nkwekọrịta kacha nta bụ otu ọnwa. Viz Vectar Plus ga-adị na-amalite na October 2020. Ọnụahịa mba ofesi nwere ike ịdị iche.
* IHE: Nbudata Live Call Jikọọ gụnyere n'efu maka nkwekọrịta nkwekọrịta izizi maka iwu Viz Vectar Plus niile emere tupu Disemba 31, 2020.
Vizrt, dị mkpụmkpụ maka Nlele na Real-Time ma ọ bụ Visual Artist, bụ ụlọ ọrụ Norwegian nke na-emepụta mmepụta ọdịnaya, njikwa na nkesa maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi dijitalụ. Vizrt bụ onye na - eweta ọrụ ịkọ akụkọ ụwa maka ndị na - emepụta ọdịnaya mgbasa ozi na mgbasa ozi, egwuregwu, dijitalụ na ụlọ ọrụ esports. Vizrt na-enye ahịa na-akọwapụta ngwanrọ dabere na ngwanrọ maka ezigbo oge eserese 3D eserese, ihe nkiri vidio, akpaaka ụlọ ọrụ, nyocha egwuregwu, njikwa ngwa ahịa mgbasa ozi, yana ngwa akụkọ banyere ndị nta akụkọ. VizrtNkwa nke nkwa bu ichikota ihe mgbagwoju anya ma bulie ihe okike. Ihe karịrị ijeri mmadụ atọ na-ekiri akụkọ a na-akọ Vizrt ndị ahịa kwa ụbọchị gụnyere site na ụlọ ọrụ mgbasa ozi dịka CNN, CBS, NBC, Fox, BBC, BSkyB, Sky Sports, Al Jazeera, NDR, ZDF, Network 18, Tencent, na ọtụtụ ndị ọzọ. Vizrt bụ akụkụ nke Vizrt Otu yana umu nne ya, NewTek na NDI®. Vizrt na-eso otu nzube nke Otu a; ọzọ akụkọ, ka gwara. www.vizrt.com
Matthew arụwo ọrụ na ma ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ ka elu karịa afọ 25. Ọ ọkachamara na mpaghara nke njikwa ọrụ mgbasa ozi dijitalụ, injinịa na mgbasa ozi. Matthew nwere nnukwu ihe ọmụma na mmepụta post dijitalụ, njikwa ego dijitalụ, mmepụta sinima dijitalụ, na ntinye akụrụngwa na ntanetị. Mazị Harchick rụsiri ọrụ ike nyocha steeti nka nka, mbelata sinema dijitalụ na teknụzụ ọdịyo dị nkọ maka mmezu nke ndị ahịa, ọ dịkwa maka mkpa gị.
Matt na ezinụlọ ya bi ugbu a na mpaghara Washington, DC.
Ihe kacha ọhụrụ site na Matt Harchick (-ahụ ihe niile)
Viz Vectar Plus: Na-enye Productionkè-Free Production - September 22, 2020
2020 #NABShow: Paịlịkọn nke CineCentral! - March 9, 2020
2020 #NABShow: I nwetara ikike ngafe gị? - March 4, 2020
Previous: Rebecca Eskreis '' Ihe Na-agbaji Ice '' na-aga n'ihu na Ememme Nkiri Woodstock
Osote: Magewell iji gosiputa Pro AV ohuru ohuru maka uwa mgbanwe na InfoComm China